Kwenyesiri ike: Fold Galaxy bụ ekwentị mpịachi Samsung | Gam akporosis
Samsung ga-akpọ mpịachi mpịakọta Samsung
Taa, yana nso nso nke Galaxy S10, Samsung ga-ewetara ya mpịachi ama, dị ka ekwenye na izu ole na ole gara aga. Ama a nwere ike ịbụ otu n'ime ndị mepụtara ọtụtụ okwu na izu ndị na-adịbeghị anya. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịchọpụta data ọhụrụ gbasara ya na CES 2019 na Jenụwarị. Ọ bụ ezie na aha ekwentị ahụ bụ ihe omimi.
N'ikpeazụ, anyị nwere aha anyị nwere ike ịtụ anya na ụdị Samsung a. Dika asuru asusu n'oge di iche iche, nka nlereanya ga-abata na aha Galaxy Fold gaa n'ụlọ ahịa. Ya mere, mgbe ọtụtụ asịrị banyere aha nwere ike ịhọrọ akara Korea, ọ dị ka ha abanyela na aha anyị nụrụ nke ukwuu.
Ya mere n'ime awa ole na ole, Nwere ike ịhụ Galaxy S10 zuru oke na Fold Galaxy a si Samsung. Ọ bụ nke mbụ mpịachi ama na ahịa, nke bụ n'ihu ndị ọzọ na-ama dị ka Huawei, onye ga-eweta nke ha na MWC 2019 mechara nke a izu.
Ihe nlereanya a bụ otu n'ime ndị na-akwado izu ndị a, inwe a nkwado video leaked gbasara ya. Ma ugbu a, nkwenye na aha gị ga-abụ Fold Galaxy Ọ bụ ihe a tụrụ anya kemgbe. Mgbe aha dị ka Galaxy X ma ọ bụ Galaxy F.
Samsung chọrọ weghachite ọnọdụ ya dị ka ụlọ ọrụ ọhụụ na ahịa na 2019. Yabụ, ngosi nke Fold Galaxy a dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na n'ụzọ a, ha ga-enwe ike ịlaghachi n'ọnọdụ a, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ ga-enyere ha aka na usoro nke iru ya.
N'ime awa ole na ole, na njedebe nke ụbọchị, anyị nwere ike mara Galaxy Fold na Galaxy S10 na ngosi a sitere na Samsung. Otu n'ime usoro kachasị atụ anya maka ọkara nke afọ ga-emecha bụrụ ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung ga-akpọ mpịachi mpịakọta Samsung
Vivo U1: Ọhụrụ batrị ọhụrụ dị nso
OPPO na Ericsson bịanyere aka na nkwekọrịta ikike patenti zuru ụwa ọnụ